Mhlawumbi uyazi malunga nezibalo ezibuhlungu, ezachazwa kwingoma edumileyo: "... kubantombazana abalishumi ngokulandelelanisa, abafana abathandathu ..." Kukho rhoqo abameli abemi belizwe lethu kunabameli besigqibo esihle sabantu. Ngobutsha bakhe, kulula ukuba ibhinqa lifumane iqabane lobomi, ekubeni imeko ngethuba lobomi lukhulu kakhulu, kwaye iimfuno zabaviwa abanako ziphantsi. Ngokubudala, izicelo zamabhinqa zentsapho yokuhlala iqabane liyakhula, kwaye ithuba lokutshata linciphisa.
Imeko ngokusebenzisa i-prism.
Ngokuqhelekileyo amabhinqa abukeka kwindoda abayithandayo ngokusebenzisa iiglasi ezinemibala engama-25 iminyaka. Ngelo xesha umfazi usemncinci, mhle, ngoko ke ukuba akadibanisi ubomi bakhe nomntu, kufuneka afune ingxaki kuye. Ukuba la mazwi malunga nawe, mhlawumbi unamahloni. Iintloni ezingaphezulu ziyakubonakala ngezizathu ezahlukeneyo. Ngokuqhelekileyo oku kubangelwa kwiinkqubo ezikhulayo ukusuka ebuntwaneni. Kuphela unogqirha wengqondo onokufunda unokuncedisa apha. Kule meko, kufuneka ukhangele isizathu, uze usebenze ngokwakho, ufumane ukuzithemba.
Kukho esinye isizathu sokuba neentloni ngamantombazana amancinci. Ngokuqhelekileyo, amantombazana amantombazana azijonga njengamafutha, ambi, njl. Ngokuqhelekileyo ezi zibango zibonakala zingenangqiqo. Ukuba wena, okanye mhlawumbi intombi yakho inenkinga enjalo, kufuneka wenze okusemandleni akho. Kubalulekile ukuphelisa ezo zakhiwo. Kuya kuba yinto enqabileyo ukuba usebenze ngokubonakala kwakho. Ukugqithiswa kwenziwa kuphela ngamaxesha okukhubazeka kokuzalwa. Kule meko, kuphela ugqirha weplastiki onokukunceda.
Izizathu ezingentla zingekho nje ngolu hlobo njengesithathu. Abasetyhini abaninzi ebusheni babo okanye kamva bafumana amava amaninzi othandweni. Ngaloo nto, lo mfazi ufika ekuqinisekiseni amandla akhe, ukudideka kwaye, mhlawumbi, ukulahla ubudlelwane bokamva. Kule meko, akufanele ulahlekelwe ithemba, ukuzithemba. Kufuneka ukholelwe kwinhlanhla yakho kwaye ujonge. Ngokuqinisekileyo awuzange uhlangabezane nomntu wakho. Kodwa iholide iya kufikelela kwisitalato sakho. Kufuneka nje ube nomonde, ixesha liya kudlula, kwaye uya kufumana iqabane lomphefumlo.
Amadoda amathathu emva kwexesha ahlala enza iimfuno eziphakamileyo kwikhethiweyo. Abambalwa abantu basabela kwizo zicelo. Kule meko, amaninzi amabhinqa awela kwelinye icala: akulungele ukutshata ngomntu othile, nje ukuba abe nendoda endlwini yakhe. Apha kufuneka ume, uthathe umoya uze ucinge: kwaye unokudibana nalo mntu? Ngaba iimpazamo zakhe aziyi kubuyisa ubomi bakho? Ngaba ulungele ukunyamezela yakhe imikhwa emibi kunye neendlwana ezincinci? Cinga ngale miba kakhulu. Phinda ufundise umntu ongenakwenzeka ukuba uphumelele, kwaye akuyimfuneko. Akuyena wonke umntu uya kunyamezela, ukuba azame ukummisa. Kwaye ukuba uyakuvumela ukuba wenze oku, mhlawumbi unqabile kwaye unamandla.
Ngaba kukho indoda efanelekileyo?
Nangona kunjalo, ufanele uhlale ukhumbule ukuba okufanelekileyo, ngokusemthethweni, ayikho. Abantu abesilisa abangenayo imikhwa emibi kunye neenkcaso ezinomsindo (ibhola lebhola, ukuloba, ikhomputha, njl njl.) Ayifumanekanga kwindalo. Ngoko ke, kuya kufuneka unciphise ibha ye zicelo zakho, kodwa ungayiphonsa kakhulu.
Ukuzixhalabisa nje ngokuphuma?
Abasetyhini abaninzi, abazange bafumane iqabane zabo, okanye badidekile kumadoda, bakhetha ukuhlala bodwa. Nangona kunjalo, le meko inezinto ezininzi ezingonakaliyo: ukuba ebomini bakho buhlungu okanye uvuyo, awuyi kubelana ngamava kunye nemvakalelo yakho nabani na. Ukunqongophala nokungabikho komntu obunomdla - kungabi namnye onokubeka igalelo elinamandla; wonke umsebenzi wesilisa ekhaya uya kunyanzelwa ukuba wenze ngokwakho, okanye uqeshe abantu kule njongo. Mhlawumbi, emva kokuphoxeka, ukuhlambalaza ubulili besilisa, nokuba nobomi obunjalo buya kubonakala ngathi yinto yefestile, kodwa mhlawumbi iyakuthwala ngokukhawuleza. Ngoko ke, kufuneka uqokelele amandla, ukhohlwe kwaye uxolele zonke izikhalazo ezidlulileyo kwaye ukholelwe ukuba uya kudibana nomntu onobuhle. Kuyakubonakala ngathi uyona mhle, awuyi kuqaphela ukungaphumeleli kwayo, kwaye kuya kuxolelwa iimpazamo ezincinane.
Nangona kunjalo, ukufumana indoda, kufuneka wenze imizamo ethile. Ukutyelela indawo apho ungadibana nayo indoda yakho. Kwaye uyeke ukujonga ngaphakathi ngaphakathi kwakho, jonga ngapha. Mhlawumbi indoda yamaphupha akho isebenza eduze kwakho. Okanye uya kudibana naye kwivenkile. Smile kaninzi. Smile isikhali sakho esihle. Bonisa umonakalo ongekho kuphela kwinkampani yabahlobo bakho, kodwa nakubantu abasondeleyo. Khumbula ukuba amadoda afana nabesifazane abaninzi bavuya. Musa ukuhlazeka kubantu abafuna ukukuhlangabeza. Ukufumana umfazi ngumntu, ngoko usebenze. Mhlawumbi le yithuba lakho lolonwabo oluthandayo. Nangona kunjalo, lumkela, kungekhona bonke abantu abanenjongo ezilungileyo. Namela ingcinga yakho. Mhlawumbi, emehlweni akho, ukuzingca ngokweqile kubhaliweyo. Lahla le mpawu embi. Ulibale ama-Hollywood amaqhinga abantu. Kuphela kwiimifanekiso zomoya kunye nomntu omhle, onamandla, kwaye ohlakaniphile. Khumbula iifilimu zama-1960, ezidla ngokubonisa imeko xa ibhinqa lizibumba. Ngoko ke, okokuqala, udinga umonde, ubulumko, ukuqonda kunye nokunyamekela.
Musa ukuzijonga ucocekile okanye, ngokuchaseneyo, unzima kakhulu umntu. Eyokuqala akunakwenzeka ukuba wabelane nawe ubunzima bokuphila kwaye uya kufaka indawo yamagxa akho; okwesibini akunakwenzeka ukuhlonela uluvo lwakho.
Yaye uyayiqonda: awufuni nje kuphela ukuba ube neqabane eliyingqondi kunye nelifundayo. Le ndoda iphinda ifune i-caresses kunye neenkathalo, ifuna ukuba nomfazi onjalo eceleni kwayo, ngubani oza kuqonda, ukuphulaphula, ukunika iingcebiso, apho kukho into ekuthetha ngayo. Ngoko ke, sebenza kuwe, uhlakulele ulwazi, fumana imfundo eyongezelelweyo. Oku akusayi kukusondeza kuphela kwintlanganiso kunye nendoda yamaphupha akho, kodwa kwakhona kukuvumela ukuba uziphazamise, ukhohlwa malunga nokukhangela kwexesha elifutshane.
Siyathemba ukuba iingcebiso zengqondo yengqondo "Indlela yokufumana indoda yakho ibhinqa" ngokuqinisekileyo kukunceda, kwaye uya kudibana neqabane lakho.
Ubuhlobo phakathi kwabasetyhini kunye namadoda
Kutheni si soyika u lonwabo?
Iimfihlelo eziphambili zabasetyhini abafanelekileyo
Ngaba ndifanele ndixoxe ngomyeni wam nabahlobo bam?
Ufuna ukutshata? - Yiba "imveliso"!
Umona omnyama nomhlophe
Ukulibala kwengqondo kumntwana
Ukungasebenzi kwezigulane ze-endocrine
Uthando uTolkalina: ubomi kunye nokuthandana nabantu
I-Crostini ene-feta cheese kunye nenkukhu
Indlela yokuyeka umsebenzi wakho ngokufanelekileyo?
Sunny Beauty: imithetho ye-TOP-3 ye-beach make-up
I-Cheese ifake kwi-batter
Ukukhohlakeleka komntu othandekayo kwi-Intanethi
I-pike yebhayisiki ebhaka kunye noshizi
Unokwenza njani udoti?
Izindlela ezili-15 zokulibala umfana ngosuku
Indlela yokudibanisa iindidi eziphambili ze-crochet yekholam